शुक्रनगरमा कृषि कार्यशाला – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
शुक्रनगरमा कृषि कार्यशाला
२०७० चैत्र १०, सोमबार ०२:४३ गते
शुक्रनगर । एक दिने जिल्ला स्तरीय विषादी, स्वास्थ्य तथा वातावरण सम्बन्धी अन्तत्र्रिmयात्मक सम्मेलन शनिबार शुक्रनगरमा भएको छ । डेनमार्कको डायलोगज र नेपाल सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रा. चन्द्रकिशोर मण्डलले कृषकहरु धेरै मिहिनेती हुने र कृषिविना कोही पनि बाँच्न नसक्ने बताउँदै जीवनमा विषादी प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा आयोजनाका कृषि विज्ञ सुन्दर तिवारीले चितवनमा विषादी प्रयोगको अवस्था बारेमा बताउनुभयो । फिल्ड संयोजक दीपक ज्ञवालीले ‘विषादी र जनस्वास्थ्य’ विषयक आफ्नो कार्यपत्र राख्नुहुँदै संस्थाले तीन वर्ष कृषकसँगै रहेर कृषि तथा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने जनाउनुभयो । आयोजनाका कार्यक्रम संयोजक डा. श्रीकृष्ण गिरीले आयोजनाले अहिलेसम्म प्राप्त तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुहुँदै चितवनमा विषादीको प्रयोग डरलाग्दो रहेको र त्यसको नियन्त्रणमा लागू पर्ने जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वैज्ञानिक घनश्याम भण्डारी, जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यलयका डा. दुर्गादत्त चापागाई, जिल्ला कृषि विकास कार्यलयका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत कमलनाथ वाग्ले, क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका डा. दयालक्ष्मी जोशी, अर्गानिक सर्टिफिकेशन नेपालका अध्यक्ष बसन्त रानाभाटलगायतले बोल्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा जगतपुर, मंगलपुर तथा शुक्रनगर गरेर १०० भन्दा बढी किसान सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा विषादीको व्यापक प्रयोग, त्यसले पार्ने असर, क्यान्सरलगायतको रोगको कारण र सावधानी र वैकल्पिक उपायका बारेमा छलफल भयो ।